Broadcast Internet Drives အစစ်အမှန်ကမ္ဘာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ ထွန်းသစ်စစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ATSC 3.0 လွှမ်းခြုံနိုင်စွမ်းကိုတောင်းဆိုရန် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Broadcast Internet Drives အစစ်အမှန်ကမ္ဘာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ ထွန်းသစ်စစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ATSC 3.0 လွှမ်းခြုံနိုင်စွမ်းကိုတောင်းဆိုထားသည်
Hunt Valley, MD–September 17, 2020– What is the broadcast internet? It’saone-to-many enhancement to the public internet that enables specific, new business cases for local broadcasters and entrepreneurs.
“If you have spectrum and ATSC 3.0, you can have multiple unrelated services. It’s not all video and audio any longer,” said Louis Libin, vice president of Spectrum Engineering & Policy, at Sinclair Broadcast Group, duringaSept. 1 webinar on how to make money with ATSC 3.0, the technology standard that facilitates customized use of TV spectrum.
စီးပွားရေးကိစ္စ #1: ဖောင်ဒေးရှင်း
လက်ရှိကြိုးမဲ့ကွန်ယက်များသည်စက်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကိုအချက်ပြမှုတစ်ခုချင်းစီပို့လွှတ်သည်။ တက္ကဆက်အခြေစိုက် ARK Multicasting ကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Josh Weiss ကရုပ်မြင်သံကြားလိုင်း ၂၈၃ ခုတွင်ထုတ်လွှင့်သည့်အင်တာနက်ကိုဖြန့်ချိသောဆက်သွယ်မှုများနှင့်နှောင့်နှေးမှုများကိုပိုမိုဆိုးဝါးစေနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဥပမာအားဖြင့်မတ်လတွင် Verizon ၏ကွန်ယက်ပေါ်ရှိအသွားအလာသည် ၆.၅ exabytes တွင်ရှိသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် streaming video သည် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်။ နှိုင်းယှဉ်မှုအရ ARK ၏ ATSC 6.5 ပါသော Dallas LPTV ဘူတာသည်ထိုစျေးကွက်အတွင်းရှိအချက်အလက်ပမာဏ၏ ၇ ဆနီးပါးခန့်ကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပြီးရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုအင်တာနက်ကိုဗီဒီယိုအသွားအလာများကိုလျှော့ချရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲအသစ်ပြောင်းခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ကားသို့မဟုတ်အဝေးမှသင်ယူခြင်းကဲ့သို့သောအရာများပါဝင်သည်။ ပြန်လာသည့်လမ်းကြောင်းမရှိပါ။
စီးပွားရေးကိစ္စ #2: အဝေးမှထုတ်လုပ်မှု
CP Communication ၏နည်းပညာအရာရှိချုပ် Jerry Gepner သည်သူ၏ခါးပတ်အောက်တွင်ဆယ်စုနှစ်လေးစုကြာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်မှုရှိသည်။
"မြို့တစ်မြို့ကအားကစားပွဲတစ်ခုကိုကွန်ယက်တစ်ခုထုတ်လွှင့်နိုင်တဲ့အစောပိုင်းရက်တွေကိုမှတ်မိနေတုန်းပဲ။ ဒီဒေသကအသံလွှင့်ဌာနကိုဒေသတွင်းဘူတာရုံကတကယ်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေတယ်" ဟုသူကပြောသည်။ "ဒီနေ့ရက်တွေကြာမြင့်စွာလွတ်လပ်သောရောင်းချသူများနှင့်အမျိုးသားဖိုင်ဘာပံ့ပိုးသူများ၏တိုးတက်မှုနှင့်အတူကြာမြင့်စွာရှိနေပြီ။ "
"ATSC 3.0 သည်ထုတ်လွှင့်သူများအနေဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်သူများအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ထူးခြားသော ၀ န်ဆောင်မှုများစွာကိုခွင့်ပြုထားသည့်အတွက်ဤအစီအစဉ်သို့ပြန်လည် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုပေးထားကြောင်းနှင့်အထူးသဖြင့် COVID-19 တွင်သူကပြောကြားခဲ့သည်။ သော့ချက်မှာ“ စက်ရုံရှိလူအရေအတွက်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်စက်ရုပ်ကင်မရာ၊ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များနှင့် virtual ကင်မရာများဖြစ်သောဝေးလံခေါင်ဖျားသောထိန်းချုပ်သည့်အရာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုရန်နည်းပညာကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်” ဟု Gepner ကပြောကြားခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကြိုးမဲ့နည်းပညာကိုပိုမိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင် Gepner သည်ထုံးစံအရထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံများကိုတည်ဆောက်ပြီးလိုင်စင်ထုတ်ပေးရေး၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်နှင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုညှိနှိုင်းမှုများကိုအရှိန်မြှင့်ပေးသည်။
ထုတ်လွှင့်သည့်အင်တာနက်ဖြင့်အားကစားရုံအနီးတွင်စွမ်းအားနိမ့်ထုတ်လွှင့်စက်တစ်ခု၊ ထရပ်ကားတစ်ခုသို့မဟုတ်တီဗီဘူတာတစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြင့်အမိန့်၊ ထိန်းချုပ်မှုထည်အပြင်ဗီဒီယိုနှင့်အသံပို့လွှတ်မှုများကိုနံရံများ၊ လိုင်စင်နှင့်အနှောင့်အယှက်များဖြစ်စေနိုင်သည်။ ပြanနာမဟုတ်, Gepner ကဆိုသည်။ "ဒါကထုတ်လွှင့်ရေးဌာနတွေအတွက်ဂိမ်းကိုအလျင်အမြန်ပြန်ရောက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့နည်းပဲ" ဟုသူကပြောသည်။ “ စီးပွားဖြစ်အရဒါဟာထုတ်လွှင့်သူအတွက်ဝင်ငွေစီးဆင်းမှုတစ်ခုပဲ။ ၎င်းသည် ATSC 3.0 သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်အချို့ကိုကျခံနိုင်သည်။ ”
စီးပွားရေးကိစ္စ #3: လှုပ်ရှားမှုအတွက် AI
ကွန်ပြူတာဂရပ်ဖစ်စွမ်းအား NVIDIA သည်ထုတ်လွှင့်သည့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အသံ-activated Comcast xFinity ထောက်ခံချက်အင်ဂျင်ကဲ့သို့အစွန်း - မှီခိုသောနည်းပညာများကိုထောက်ပံ့ရန်အတွက်၎င်း၏ထူးခြားသောစွမ်းရည်အတွက်စိတ်အားထက်သန်သည်။ အကြံပြုချက်များသည်အစွန်းပေါ်တွင်နေထိုင်သောအတုထောက်လှမ်းရေးမှလာသည်။ ဆာဗာတစ်ခုသို့မဟုတ် node သည်မူလဆာဗာထက်အဆုံးအသုံးပြုသူနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာတည်ရှိသည်။
“The edge matters because you can’t wait onaresponse,” said Michael Kaplan, global leader for Media & Entertainment and Pro VR for NVIDIA. “Speed is important. Latency is super important here.”
အခြား NVIDIA မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သော AI အပလီကေးရှင်းများတွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုများ၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီဆူညံသံများ၊ ပရိသတ်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် Mercedes Benz ဖြန့်ချိရန်ရည်ရွယ်ထားသော ဦး တည်ချက်နှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းအင်ဂျင်တို့ပါဝင်သည်။ AnyVision စမတ်ကင်မရာစနစ်လည်းရှိသည်။ ၀.၂ စက္ကန့်အတွင်းလူပေါင်း ၁၁၅ သန်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ထိုပမာဏသည်ကင်မရာများတွင်ထားရှိရန်အလွန်လက်တွေ့ကျသောတွက်ချက်မှုပမာဏကိုအသုံးပြုသည်။
စိုက်ပျိုးရေးတွင် NVIDIA နှင့် John Deere လက်အောက်ရှိသီးနှံပေါင်းသတ်ဆေးနှင့်ပိုးသတ်ဆေးအသုံးပြုမှုတွက်ချက်ရန်အစွန်း၌ AI အစွန်းကိုအသုံးပြုထားသည်။
စီးပွားရေးကိစ္စ #4: စတုတ္ထစက်မှုတော်လှန်ရေး
တီဗီ futurist ကတီဗီအနာဂတ်တီထွင်သူသည်တီဗီအနာဂတ်အနာဂတ်အတွက်စမတ်နည်းပညာများ၊ ဆက်သွယ်မှုနှင့်အလိုအလျောက်စနစ်တို့ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသော“ စတုတ္ထစက်မှုတော်လှန်ရေး” ကိုအပြည့်အဝလက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိကြောင်းယနေ့ကြိုးမဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံများကဗီဒီယိုအပေါ်လွှမ်းမိုးထားသည်။ One World Technologies မှကျောင်းအုပ်ကြီး Lynn Rowe ။
ဖက်ဒရယ်ဆက်သွယ်ရေးကော်မရှင်ကသဘောတူသည်။ အေဂျင်စီသည်မကြာသေးမီကထုတ်လွှင့်သူများစွာအား ATSC 3.0 broadband ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးခွင့်ပြုသည့်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများသည်လွှမ်းခြုံမှုအားပိုမိုညီညွတ်စေပြီးထွန်းသစ်စစက်မှုစမတ်လုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများကိုပိုမိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုလစ်ဘင်ကပြောကြားခဲ့သည်။ ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံပေးသူထုတ်လုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒါရိုက်တာ Hiren Surti ကဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ထုတ်လွှင့်သည့်အင်တာနက်ကိုမည်သို့ခိုင်မာအောင်လုပ်ရမည်ကိုရှင်းပြခဲ့သည်။
ပထမအချက်အနေဖြင့်ဖိုင်ဘာဆက်သွယ်မှုနိမ့်စွမ်းအားမြင့်မျှော်စင်များသည်ကွန်ယက်ကို“ အားဖြည့်ပေး” မည်ဖြစ်ပြီးအလွန်မြင့်မားသောဒေတာနှင့်ပါဝင်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောကြိမ်နှုန်းကွန်ယက်များအတွက်အုတ်မြစ်ချသည်။ ဤကွန်ယက်၏ကွန်ပျူတာစွမ်းအားနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုများစွာကို AI မှ Cloud ပတ်ဝန်းကျင်တွင် virtualized လုပ်နိုင်ပြီး application အသစ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများသည်ကြီးမားသောကတိကဝတ်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမရှိပဲချယ်ရီရွေးချယ်ခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
စီးပွားရေးကိစ္စ #5: CREATE
ATSC 3.0 ထုတ်လွှင့်သောအင်တာနက်၏အလားအလာသည်အကန့်အသတ်မရှိ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏ ၃.၀ ကိုမည်သို့အသုံးပြုမည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတိုင်းကိုဖြေဆိုရန်ကြိုးစားလျှင်ပေါင်းပင်များထဲသို့သင်ဝင်ရောက်လိမ့်မည်။
Libin.com "ATSC 3.0 ၏ရည်မှန်းချက်ကိုအစမှအဘယ်သို့ဖြစ်ခဲ့သည်သတိရပါ။ ထုတ်လွှင့်သူများအားသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးမော်ဒယ်များ၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ တိုးတက်ပြောင်းလဲနိုင်သောအခွင့်အလမ်းများတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုရန်ကိရိယာအသစ်တစ်ခုကိုပေးရခြင်းဖြစ်သည်။
Sinclair အသံလွှင့်ဌာနမှ ATSC 3.0 ငွေပေးချေမှုစီးရီးရှိဤ webinar နှင့်အခြားသူများ၏မှတ်တမ်းတင်မှုကိုကြည့်ရှုရန်၊ www.ATSC3advocate.com
ယခင်: PlayBox Neo သည်အသစ်ပြောင်းလဲခြင်းအသစ်များနှင့်အတူအရွယ်ကြီးမားသော Virtual Channel Playout စနစ်ကိုတိုးတက်စေသည်
နောက်တစ်ခု: LTS ဂလိုဘယ်သည် AWS Elemental MediaConnect နှင့်ကွန်ယက်များအကြားအဆင်မပြေမှုရှိကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်